04-17-2011 04:35 AM #61
ဒီနေ့က ရိုးဂိုးနေ့နော် ....လွမ်းတယ်ဗျာ မရောက်တော့တာ အတော့်ကိုကြာခဲ့ပါပြီ။ အရင်တုန်းကလိုပဲ စည်ဆဲလားမသိဘူး၊ ဟိုးတုန်းကဆို ကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးလို့။ ကွဲကြပြဲကြ မူးကြရူးကြ ...အနယ်နယ်က ရေပက်ခံကားတွေနဲ့ပြည့်လို့။
BH, botchan, Dragon Ball, fridayborn, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, La Goon, Lady, Mahuya, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 04:45 AM #62
ဟား.... ဟား... စည်ပေါ့ ကိုမော်ကင်းရယ် ... အခုချိန်ထိ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့က စည်တုန်း .. ဆိုင်ကယ်တွေဆိုတာ အများကြီး ... ကျွန်တော်ဆို အရမ်းပြန်ချင်တာ မတ်လပဲပြန် ဧပရယ်ထပ်ပြန်ရင် အိမ်ကဖနောင့်နဲ့ ပေါက်လိမ့်မယ် .. နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆို ၇ နာရီလောက်ထွက် ရိုးဂိုး ကျိုက်မရော သွား .. ပြီးတော့ ၂ နာရီလောက်ပြန် .... သံဖြူဇရပ်ကို သုံးနာရီလောက်ရောက် ... ၃ နာရီလောက်ကနေ မိုးချုပ်ထိ လျှောက်ပတ်ပေတော့ ... ၂၀၁၂ ကျရင်တွေ့မယ်လေ .. ဒီနှစ်ပြီးရင် ပြီးပြီ ...
BH, botchan, Dragon Ball, fridayborn, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, Mahuya, mokenlay, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 04:57 AM #63
ဒီနေ့က ရိုးဂိုးနေ့နော် ....လွမ်းတယ်ဗျာ
[[ ... rk'Hku uefBuD;rSmxdk;wJh vufa0SYyGJaum .......
nDudk0rf;uGJawG 'DyGJxdk;zdkYqdk Buifhaewm 3vavmuf .... 'Dvdkcsdefa&muf&if b,fvdkrSaer&wm wBuGBuGeJY
OD;av;awGu avmif;zdkYwNyifNyif .. ol&dkYrdef;rawGu ydkufqHzGufwJhcsdef .... nD0rf;uGJeJYwpfcgvuf&nfprf;wm vSrf;uefvdkufwm a*smwJhwJhxdNyD; ESmESyf,lvdkuf&w,f ...
botchan, Dragon Ball, fridayborn, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, kosatsu, La Goon, Mahuya, mokenlay, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 05:22 AM #64
ဟုတ်တယ်နော် မုဒုံကန်ကြီးကလည်း သင်္ကြန်အရမ်းစည်တာ၊ မော်လမြိုင် သင်္ကြန်ဆိုတာက မုဒုံ၊ ကျိုက်ခမီ-စက်စဲ၊ ကျိုက်မရော၊ ရိုးဂိုး မပါမပြီးပဲလေ။
botchan, Dragon Ball, fridayborn, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, kosatsu, La Goon, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 05:26 AM #65
oMuFefrSm wacgufawmh armfvNrdKifoGm;vnfOD;rSyg/ ukdbDajymwJh uefMuD;u vufa0SUyGJvnf; Munfhcsifw,f/ &kd;*kd;vnf; oGm;csifw,f/ pufpJvnf;oGm;&if;/
BH, Botazan, Dragon Ball, fridayborn, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, kosatsu, La Goon, Lady, Mahuya, mokenlay, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 07:41 AM #66
မော်လမြိုင်ကတော့ သင်္ကြန်ရေပက်တာ ၅ရက်အပြည့်ပဲ။ အကြိုကတည်းကစပက်တယ်။ အကျဆိုရင် မဏ္ဍပ်ဖွင့်ပွဲတွေနဲ့စပြီပေါ့။ အကြတ်နေ့က မုဒုံနေ့လို့ခေါ်တယ်ဗျ။ မော်လမြိုင်ကသင်္ကြန်လည်တဲ့ကားတွေ မနက်ပိုင်းဆို မုဒုံဆင်းပြီးမုဒုံပတ် ကန်ကြီးတ၀ိုက် မြို့ပတ်လမ်းမဏ္ဍပ်တွေနဲ့တော်တော်စည်တယ်။ သင်္ဘောဦးနားက အစည်ဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ ... နော် ကိုဘီ။
မုဒုံသွားကြတယ်ဆိုတာ မုဒုံကန်တော်ကြီးဘုရားပွဲတော်လေ။ ဘုရားဝင်းရှေ့မှာ ကိုဘီပြောပြောနေတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲဗျ။ ၀ါသနာရှင်တက်ထိုးတဲ့ပွဲလေ။ မုဒုံကနေ နေ့လည်ပြန်မှ ညနေ မော်လမြိုင်မှာစည်တာ ... ဒါကလည်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်လေ။ မော်လမြိုင်က တောင်မြောက်သွယ်နေတဲ့ တောင်ညိုတောင်တန်းနဲ့ သံလွင်မြစ်ကြောင့် မြို့ကျဉ်းပြီးရှည်တယ်။ မဏ္ဍပ်တော်တော်များများက သံလွင်မြစ်ကရေကို စုပ်တင်ပြီး ပက်ကြတာဗျ။ မဏ္ဍပ်ကို သံလွင်မြစ်ဖက်ကိုကျောပေးပြီးဆောက်ကြတာများတယ် ... ဆိုတော့ မနက်ပိုင်းက မဏ္ဍပ်ကိုနေထိုးတယ်။ ညနေဆို နေရိပ်ကျတယ်။ အဲတာကြောင့် ညနေပိုင်းဆို မော်လမြိုင်မဏ္ဍပ်ကစည်တယ်။
အတက်နေ့ဆိုရင် ကျိုက်မရောသွားကြတယ်။ ကျိုက်မရောကလည်း ဘုရားပွဲရှိတယ်။ အဲတာကြောင့် မနက်ပိုင်းသွားပြီး ညနေပိုင်းပြန်ကြပေါ့။
နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဆိုရင် ရိုးဂိုးရွာဘုရားပွဲကိုသွားကြတာ ... တော်တော်စည်ပေါ့။
ဟိုးအရင် ၀င်းဦးရှိတုန်းကဆို အနုပညာရှင်တွေ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဆို မော်လမြိုင်လာကြပြီး ဖျော်ဖြေတယ်။ သူများမြို့ရွာတွေမှာ နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ ဘုရားသွားငါးလွှတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ မွန်ပြည်နယ်ကတော့ သင်္ကြန်ကျနေတုန်း ... မူးလို့ကောင်းတုန်းပဲ
နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဆို မော်လမြိုင်က ခေါင်းပုတ်ရေကားနဲ့ တိုက်ပေါ်ကနေ သင်္ကြန်ပွဲအားပေးတဲ့လူတွေ (မဒီတွေ) ကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့လိုက်ပက်တာ၊ ဆိုင်ကယ်ပွဲစားများဦးဆောင်တဲ့ အိပ်ဇော့ပိုက်ဖြုတ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်အစီး ၃၀ လောက် စုပြီး မောင်းတာ လုပ်ကြတယ် ... အရင်ကပြောတာနော် .... ခုခေတ်တော့ အိမ်တိုင်းနီးပါးဆိုင်ကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ ပိုဆိုးမယ်ထင်တာပဲ။ ကျနော်ပြောတာ ယ/၂သောင်း ၀န်းကျင်ခေတ်ကနော်။ ခုကတော့ နံပါတ်စုံဖြစ်နေပြီ။
ဒေါ်လေဒီတို့ အိမ်ရှေ့မှာ တိုင်ကီတွေစည်ထားပြီး သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ အုန်းလက်မဏ္ဍပ် လုပ်တယ်။ ရေပေါတယ်လေ ..အိမ်ဘေးက ပန်းဘဲတန်းချောင်းပဲ .. နော် အမ
မွန်ပြည်နယ်ကိုက အပျော်ပါးပေါတယ်၊ ပွဲလန်းသဘင်များတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘီလူးကျွန်း (ချောင်းဆုံမြို့နယ်) ၆၄ ရွာဆိုရင် ပွဲတော် တရွာ ၂ရက်လုပ်လိုက်တာ ၆၄ရွာပြည့်မှ ရပ်တာနော်။ အရင်ခေတ်ကဆို ချောင်းဆုံသင်္ဘော၊ ကလွီသင်္ဘော စီးပြီး ဘုရားပွဲသာသွားလိုက်တော့ ၁၂၈ ရက် ပွဲလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။ စားဖို့နေဖို့မပူရဘူး။ မသိတဲ့အိမ်လည်းတက်စားဘဲ။ အိမ်တိုင်းလိုကျွေးတယ်၊ အိပ်စရာပေးတယ် ရွာကိုလာလည်တဲ့ဧည့်သည် ဆိုပြီး ဧည့်ဝတ်ကြေကျတယ်။
မော်လမြိုင်ဆိုလည်း သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုရင် ၂၈ ရပ်ကွက် (အရင်ကနော် - ခုတော့ ပိုများနေပြီ) ဆွမ်းကြီးလောင်း ပွဲစပြီဆိုရင် တရပ်ကွက် ၂ညနှုံးနဲ့ ၂၈ ရပ်ကွက်ဆိုတော့ ၅၆ ရက် ပွဲတော် ကျင်းပတာလေ။ ပထမက ထားဝယ်စုရပ်ကွက်ကစတယ်။ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မရမ်းကုန်းရပ်ကွက်ပွဲဆိုရင် အထူး ၃ည တောင်လုပ်တာနော်။ ကျနော်တို့ငယ်တုန်းက ရပ်ကွက်တွေဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲတွေဆိုရင် ဇာတ်သဘင်မပါမပြီးဘဲ။ ဇာတ်ပွဲမထည့်နိုင်ရင် ရပ်ကွက်က မျက်နှာမလှဘူး။ အရင်က ဇာတ်ပွဲတွေ သဘင်သည်တွေလည်း မွန်ပြည်နယ်က ထွက်တာ များတယ်။ စိုးမင်းအောင်၊ ပုလင်းစိန်၊ အမြည်းစိန်၊ ဖန်ခွက်စိန်၊ ကျနော့်သဘင်တင်မိုးဝင်း၊ ဆန်းဝင်းကြည် ... စတဲ့ ဇာတ်တွေ မွန်ပြည်နယ်သားတွေဘဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ရပ်ကွက်ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲတွေမှာ ဇာတ်ပွဲတွေ တ၀ကြည့်တာပေါ့။ ဗလာပွဲတွေပဲ။ တခြားမြို့တွေသွားတော့ ထူးဆန်းနေတယ်လေ ... ၊ ဇာတ်ပွဲကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ နားမလည်ဘူး....ဇာတ်ပွဲဆိုတာ အလကားကြည့်ရတဲ့မျိုးပဲထင်နေတာလေ၊ ကိုယ့်မြို့မှာ ဇာတ်ရုံနဲ့ မလုပ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ ပန်းဘဲတန်းဆွမ်းကြီးလောင်းဆို အနည်းဆုံး ဇာတ်ပွဲက ၄ဇာတ်နဲ့ တီးဝိုင်းက ၂၀ိုင်းလောက် ထည့်တာ ... ပန်းဘဲတန်းလမ်းမှာတင် အပေါ်လမ်း အမှတ်ကိုးကျောင်းနားမှာ ဇာတ်တဇာတ်၊ အလယ်လမ်းမှာ ကတီးဝိုင်း၊ အောက်လမ်းဆွမ်းလောင်းဓမ္မာရုံမှာ ဇာတ်တဇာတ် အဲလိုကျင်းပတာ။
ကိုယ့်ရပ်ကွက်ပွဲဆို ပထမညနေမှာ တခြားရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်တယ်။ အိမ်မှာ အအေး၊ မုန့်၊ ကော်ဖီ .. စတာတွေနဲ့ဧည့်ခံကြတယ်။ ပထမည ဇာတ်ပွဲတွေပြီးချိန်ဆိုရင် မနက် ၆နာရီလောက်မှာ ဇာတ်ကနေ ဗျောတီးပေးတယ်။ ရပ်ကွက်တွေမှာ သဲဖြူခင်း ရာဇမတ်တွေ ဇောင်းတန်းမုဒ်ဦးတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ဆွမ်းကြီးလောင်းကြတယ်။ ဒုတိယညကတော့ မိုးလင်းပြီး ဇာတ်ပွဲက မင်းသမီးတွေ မိတ်ကပ်မဖျက်ခင် ပြန်အိပ်မှ ..
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မသိဘူးဗျ။ ဇာတ်ပွဲတွေမှာ ပြီးရင် အောင်ပါစေ (ရွှေမန်းတင်မောင်) ရဲ့သီချင်းနဲ့ ပွဲသိမ်းတယ်။ တဇာတ်လာရင်လည်း အောင်ပါစေ၊ နောက်တဇာတ်လာရင်လည်းအောင်ပါစေဆိုတော့ ... အောင်ပါစေဆိုပြီးဆိုရင်တော့ ဇာတ်ပွဲ ပြီးပြီပေါ့... အဲလိုမှတ်ထားထားတာနော်။ အဲတုန်းက ကောင်စီလူကြီးတွေ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲ မစခင်မှာ အိမ်စေ့ အလှူငွေလိုက်ကောက်တယ်။ ပြီးရင် ဇာတ်ပွဲငှားပေးကြတယ်။ ခုတော့ ပုံပြင်တွေလိုဖြစ်ကုန်ပြီထင်တယ်။ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းပြီးကတည်းက မော်လမြိုင် ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲကို ပွဲမသွင်းရ၊ ဘာညာအမိန့်တွေနဲ့ စလိုက်ကတည်းကနေ မစည်တော့ဘူးထင်တာပါဘဲ။
ခုခေတ်မှာတော့ အဲလိုလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်လေ။ စေတနာရှိပေမယ့် အခြေနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မကျင်းပနိုင်တော့ဘူးလေ။ သြော် ... မော်လမြိုင်ဆွမ်းကြီးလောင်းနဲ့ ပွဲတော်တွေအကြောင်းကို အမှတ်တရ ပြန်ပြောတာနော်၊ ၁၉၈၈ ရှေ့ပိုင်းအထိက အဲလိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ပိုင်းကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်၊ ဘယ်လို ဆက်လက်ကျင်းပတာ ကျနော်လည်း သေချာမသိတော့ပါ။
ကျနော်တို့မွန်ပြည်နယ်က ၀ါဆိုလပြည့်ဆိုရင် လူကြီးတွေကိုလိုက်ကန်တော့ မုန့်တွေ ၀ါဆိုဖယောင်းတိုင်တွေနဲ့ပေါ့။ တခြားနယ်ရောက်မှ ၀ါဆိုသွားကန်တော့ရင် အထူးဆန်းဖြစ်နေကြတယ်။ အလေ့အထ မရှိဘူးဆိုပဲ။ သီတင်းကျွတ်ရင်လည်း လူကြီးတွေကိုလိုက်ကန်တော့ကြပြန်ရော ... မွန်ပြည်နယ်အလေ့အထပေါ့။ ၀ါဆိုသင်္ကန်းကိုလည်း ကပ်ကြသလို ကထိန်ကိုသေချာခင်းကြတယ်။ ကျနော်တို့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝအထိ အစိုးရစာသင်ကျာင်းတွေကနေ ကထိန်လှည့်တာ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်တာတွေ လုပ်တာရှိသေးတယ်။
ဖတ်ရတာအချိုးမပြေရင်ခွင့်လွှတ်ဗျာ။ စာမရေးတာကြာပြီဆိုတော့ ရောက်တုန်းလေး သတိရတာတွေကို ရေးတာဆိုတော့ တကယ့်ကိုတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ကို ဖြစ်နေတယ်လေ။ ငလျင်ကလည်း မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ် နေ့တိုင်းကိုလှုပ်တုန်းဗျာ။ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ကြပါစေ။
bagyitaw, BH, Botazan, botchan, dotekhaowe, fridayborn, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, La Goon, Lady, Mahuya, Mini_Me, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-17-2011 07:47 AM #67
oMuFeftusaeUuwnf;u tar&duefrSmaewJh ta':&JUcifyGef; (armfvjrdKifom usaemfhxH tvnf a&mufaew,f/olUeJU armfvjrdKiftaMumif;? armfvjrdKifoMuFeftaMumif;awG pm;jrHKUjyefvdkU aumif;rSaumif;aygh/
'DaeUuawmh &kd;*dk;aeUav ....b,farhEdkifyghrvJ/ aemufqkH;aysmfcJh&wJh &dk;*dk;aeUuawmh 1980 ckESpf ESpfqef;wpf&ufaeU/ rdIUawGudka&myufwmuawmh rk'kH vrf;wifr[kwfzl;? usdKufra&mvrf;vnf; tJ'DvdkvkyfwmyJ/ usaemf4wef;ausmif;om;b0uwnf;u xdzl;w,f/ &dk;*dk;aeUqdk&if trsdK;xJu rdef;rawGudk roGm;&zl;jyD;wm;xm;w,f/ odw,fr[kwfvm;/ udk,fwdkU oli,fcsif;awGuawmh tom;ukefudkuJjyD/ &dk;*dk;rSm tcsKyfum; u 15 rdepfwcg tcsKyfom;awGudk &Jpcef;wdkU? ,m,DtcsKyfpcef;wdkUudk oGm;ydkUae&w,f/ &dk;*dk;&Gmuvnf; ta&SUawmifwdkif;ppfXmecsKyfeJU eD;awmh ppfwyfaygif;pkHu ppfom;awG trl;vGefjyD; &rf;ukefMua&m? wyfxdef;awG tJvdkrl;wJh ppfom;awGudk vufoD;eJUxdk;? *sL'dkeJUudkifayguf? u&maw;eJUupf ..... ESpfwdkif;pkHaeatmifawGUcJhzl;w,f/
udk,fwdkUuvnf; uJuJawG (a,mufusm;ausmif;oufoufu abmf'gawGav)/ 'DaeUtxd rarhEdkifwmuawmh &dk;*dk;&Gmtv,frSm pifjrifhay:rSm tqdkawmfrawG oDcsif;qdkae&if udkvlacsm wdkU abmf'gwodkuf pifatmufrSm uvdkufMuwJhauG;aeawmhwmyJ/ 'DvdkaeUrS rarmhwJhaumifawG ...... rmrDpdefwdkU tkyfxJoGm;oifhw,f/ udkvlacsm wdkUuawmh oMuFef (3) &uf - tMuwf? twuf? ESpfqef;w&ufaeUawGrSm rD;ukef&rf;ukefudk uJyJ/ AdkufxJrD;cJxnfhjyD; tdrfjyefvmvnf; oMuFeftcsdefudk; qdkjyD; zm;om; rm;om; wdkUu wjyHK;jyHK; eJUcGifhvTwfw,f/ 10 wef;ajzjyD;wJh wESpf oli,fcsif; *spfum;eJU vnfywfaewkef; &dk;*dk;&GmrSm aps;MuD; oxkHwHwm;vrf; &m&m0if;uaumifrav;awG wtkyfeJUawGUvdkU um;ay:ac:wifvmwm ........ b,fajymaumif;rvJ ..... yGJawmfMuD;aygh/
*spfum;rSm vl 20 ausmfoGm;w,fav/ wcsdKUaumifrav;awGu 12 ESpf 14 ESpfyJ&SdOD;r,f ........ um;awGuvnf;aumif;? [Gef;awGuvJaumif; ....... udkvlacsm wdkU pdefyufausmif;om;tkyfpk wvrf;vkH; [Gef;wD;wmaygh? um;av;awGuvnf; wcpfcpfeJU/
2010 ckESpfausmfvGefvmawmh tJ'Dwkef;u aysmfcJhwJholi,fcsif;wa,mufqdk&if aoawmifaooGm;jyD/
tJ'DvdktcsdefawGudk owd&ayrJh Z&mtdk tzdk;MuD;b0 owd&wmuvGJvdkU bmwwfEdkifawmhrSmvnf;/
usaemfwdkYrGefjynfe,fu 0gqdkvjynfhqdk&if vlMuD;awGudkvdkufuefawmh rkefYawG 0gqdkza,mif;wdkifawGeJYaygh/ wjcm;e,fa&mufrS 0gqdkoGm;uefawmh&if txl;qef;jzpfaeMuw,f/ tavhtx r&dSbl;qdkyJ/ oDwif;ußGwf&ifvnf; vlMuD;awGudkvdkufuefawmhMujyefa&m ... rGefjynfe,ftavhtxaygh/ 0gqdkouFef;udkvnf; uyfMuovdk uxdefudkaocsmcif;Muw,f/ usaemfwdkY txufwef;ausmif;om;b0txd tpdk;&pmoifusmif;awGuae uxdefvSnfhwm uxdefouFef;uyfwmawG vkyfwm&dSao;w,f/
udke*g;a& .... raeUnuyJ usaemfta': cifyGef;onfESifh armfvjrdKiftaMumif;awG xdkifajymaewkef; ....0gqdkyef;cl;xGufwJh *sHK;*sHK;us taMumif;ajymMuao;w,f/ ola&m usaemfa&m a&mufcJhzl;ayrJh tckae *sHK;*sHK;us b,fae&m&SdrSef;awmif2a,mufpvkH; rodMuawmhzl;/ &SufvdkufwmAsm/
OD;av;u usdKufokwfbk&m;ta&SU (a0ZEåå,m ausmif;ta&SUtdrfu) wcg a&Tewfawmif *sDtD;wyfrSm wyfrSL; AdkvfrSL; vkyfcJhwm/ aZurÇm OD;cifa&T taMumif; olxdkifajymjyaew,f/ OD;cifa&T u olUwyf olUvufatmufu tvkyfMuyf? tckawmh OD;cifa&T u olaX;jzpfaewJhtaMumif;awGayghAsm/ usaemfwdkU2a,muf armfvjrdKifudk pm;jrHKUjyefaeMuwm/
Last edited by koluchaw; 04-17-2011 at 07:58 AM.
BH, Botazan, botchan, dotekhaowe, fridayborn, khanhlaing, KLM, kohtwe, kokokyaik, La Goon, Lady, Mahuya, mokenlay, mrlynn, orjawlan, panyailay, thatonthu, tiptop, Winnermann, YuNge
04-17-2011 11:16 AM #68
သင်္ဘောဦးနားက အစည်ဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ ... နော် ကိုဘီ။
aNymvdkYaNymwmr[kwfbl;aemf ....... oabFmOD;olawGawmfawmfacsmwm ........ bk&m;av;ql olawGvJvSwmyJ
wpfcgu qdkifu,fav;eJYvdkufwm 'Daumifrav;acsmw,fvdkY .. aemufu nDawmfarmifu ... a[ha[h .... tJwmigwdkYtrsdK;uGwJh .... uHaumif;vdkY 'DaumiftaNymNrefvdkY
မုဒုံသွားကြတယ်ဆိုတာ မုဒုံကန်တော်ကြီးဘုရားပွဲတော်လေ။ ဘုရားဝင်းရှေ့မှာ ကိုဘီပြောပြောနေတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲဗျ။ ၀ါသနာရှင်တက်ထိုးတဲ့ပွဲလေ။
tJ'DuyGJawGu wpfu,fBunfhvdkYaumif;wm wpfu,fxdk;wm ... vkyfyGJawGbmawGr&Sdbl; taotaBuxdk;wm tvJtuGJyJ ... rvJbl;qdkawmif uGJawmhuGJoGm;wmyJ ...
botchan, fridayborn, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, La Goon, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, winhtaytse, Winnermann, YuNge
04-17-2011 12:07 PM #69
အခုလည်းအဲလိုမျိုးတွေ ရှိတယ် ဦးနဂါး ... ကျွန်တော်တို့လည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရင် အစီး ၂၀ ယောက်စုပြီး သွားကြတာ ... အိပ်ဇောပိုက်တွေလည်း ဖြုတ်တယ် ... အဖေဆို ပြောတာ ပြောတာ ... မော်လမြိုင်အောက်လမ်းမှာ အိတ်ဇောပိုက်တွေလုပ်တာ ရှိတယ် ... မီးခိုးပြောင်း ဘယ်နှပြောင်းလိုချင်လဲ ... နည်းနည်းပဲညံချင်ရင်တော့ ပါဝါအိတ်ဇောထည့်ပေါ့ ... ကောင်မလေးတွေ မဏ္ထပ်ရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်လီဗာကို တဗျင်းဗျင်းဆွဲ ... အိတ်ဇောပိုက်တွေဖြုတ်ထားတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ .. ဆိုင်ကယ် အစီး ၂၀ စာလောက်ကို နားညီးတာ .... သူများမောင်းရင်းတော့ နားညီးလိုက်တာ .. ကိုယ့်လည်းနောက်ကွဲမှာ ဘယ်နောက်ကျိန်ဆဲမလည်း မသိဘူး .... ကထိန်လှည့်တာတော့ ကျွန်တော်တို့မြို့က ကျောင်းမှာ ရှိတုန်း .. ပြီးတဲ့ခေါက်ပြန်တုန်းကတောင် ကလေးတွေကထိန်လှည့်တာ တွေ့သေးတယ် .... ကလေးတွေကထိန်လှည့်တာမြင်တော့ ငါ့အသက်လည်းမငယ်တော့ပါလားလို့ ...
BH, botchan, fridayborn, Kaung Lay Luck, khanhlaing, kohtwe, kokokyaik, koluchaw, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge
04-21-2011 05:22 AM #70
armfvjrdKifoMuFefudka&mufcJhwJh twGuf eJeJawmh jyefajym jy tHk;r,f? 'HkygwfawGuawmh a&pdkrSm pdk;vdkY uifr&m r,loGm;jzpfwmeJY r&dkufcJh &bl;?
12 &ufaeU oMuFefrMudKcif 1 &ufuxJu &efukefu xGufvmw,f? vrf;rSm trsdL; &GmawG 0ifcsifwmeJYyJ reuf5em&DcGJxJu tdrfu xGufvmMuw,f? aejynfawmf vrf;ay:wuf wmeJY wdk;*dwfrSm wef;pDwm em&D0uf wdwd Mumw,f? &efukef tjyifudk xGufwJh um;awGrS wyHk wyifyJ? tck aejynfawmfvrf;u ae bk&m;MuD;udk 39 rdkifyJ &Sdawmhw,f? aejynfawmf vrf;rMud;uae bk&m;MuD; armfvjrdKifvrf;rudk4rdkifavmufyJ armif;&w,f?
vrf;rSm wae&mrS r&yfyJ armif;vmawmh 10 em&DrSm usKHu udka&mufa&m? usKHu &Gmqdkwmu ausmufawGxkwfw,f taygif ( aygifjrdKUeJY ) ewfMuD;acsmif Mum;u &Gmav;? a,mif;r &Sdawmh 0ifvdkufjzpfwm? olUudk zkef;MudKrqufxm;awmh &Sdwmav; csauR;w,f.. 'l;&if;oD; yifaMuGav;.. av'D wdkY pdwfqdk;vdkufwm ajymrae eJYawmh 0g;vkdufMuwm..
jyD;awmh c&D;qufvmjyD; nDrav; a,mufcrawG &Gmudk oGm;vdkufydkYw,f? armfvjrdKifa&mufjyD;rS tx&H wHxm;udk jzwf jyD;awmh anmifyifqdyfbufu xHk;ausmufawmifawGMum; 0ifoGm;&wm? [dka&mufawmh 12 em&D ? [if;csuf xm;zdkYMudK rSmxm;awmh csufxm;wJh [if;awGu ausmfpHau; ( zm; ao;ao; av; ) qDjyef? ig;ysuf pdrf;aum ( ig;ykwfoifudk rGefjynfe,frSm ig;ysufvdkYac:w,f ) tpdrf;udk r&rf;jym;eJY usufatmif vkyfjyD; okwfwm? aumif;rSaumif;.. qGJvdkufwm3yk*H ukefa&m?
jyD;rS armfvjrdKifjyefvmw,f ? a,mufa,muf tvkyf udpfp awG &Sdawmh vdkufvkyfay;& a&m? nbufrSmawmh r@yfu aps;MuD; r@yf wckyJ pnfw,f? rsdK;ausmhjrdKifwdkY om;nDwdkY qk&Tef;vJh wdkYvm Mu w,f? aiGrdk;rSm olwdkY wnf;Muw,f?
armfvjrdKifrSmuawmh xHk;pHyJ tkef;vufr@yf om;av; awGu ae &m tESHUrSm &Sdw,f? e*g;abm ajymawmh 'Dwacguf tjyefrSm armfvjrdKiftdrf rSm r@yfawmh rvkyfjzpfbl;? tdrfudk 0,fvdkufwJH trsdK;&JY cav;awGyJ wdkifuD csjyD; yufMuw,fav
urf;em;vrf;udk wvrf;armif;vkyfvdkufawmh ydkpnfwmaygh? urf;em;vrf;awmufavQuf r@yfawGcsnf;yJ? um;eJYawmhvSnfjjzpfw,f? rSefydwfjyD;awmhyJ? r[l&m wdkY tdrfemrSmawmif tuif pm;jzpfao;w,f
tusaeUrSm pufpJa&mufjzpfw,f? qdkifu,fawG &yfxm;wmrsm; awmfawmf rsm;w,f? 'gawmif udk,fawGa&mufoGm;awmh nae3em&D xdk;aejyD? a&pyf udkvJ qif;vdkufa&m tm;yg;yg; y&Gufquf tHkawG us aewmyJ ? rsm;vdkufwJh vlawG ? a& rMunfayrJh udk,fhpufpJ qdkawmh udk,faysmfwmyJ? a&ul;jyD;awmh yJjym; tpmodyf eJY tokwfpHk eJY rSmpm;w,f? aps;qdkifwef; bufoGm;jyD; ausmufyGifh&,f? &SyfoD&,f ? ig;tlrQif; ajcmuf&,f 0,fvm cJhw,f ?
tjyefrSm oHjzLZ&yf vJa&mufa&m ppfocsDKif;a&SUu r@yfrSm qdkifu,f tdyfaZm jzKwfarmif;vdkY qdkjyD; aumifav;awGudk vufxdyfcyf jyD; ac Gm;av &JY ? 'Davmuf armif;aeMuwm olwdkYu awmh aAmvefwD,m jzpfoGm;wmyJ qdkjyD; oem;vdkufwm ?
rk'Hka&mufawmh n7em&Dxdk;jyD ? qdkifu,fawG um;awGusyfawmh ajz;ajz;yJ armif;vm Muwm? rd[m& um;*dwfrSm zGifhxm;wJh tokwfqdkif aumif;rS aumif; ? a,mufa,mufuawmh pm;aeuswJh ? rGefrav;u acsmvJacsm rsufESmvJ csdKw,f? 'Davmuf vlawG &IyfaewmawmifrS oeyfcg;rysuf tjyHK; rysufyJ? r&dk;wef; yJjym; tpmodyfeJY c&rf;csOfoD; tpmodyf pm;vdkufa&m
aemuf&uf tMuwfaeU rSm usdKufra&m a&mufw,f ? odyfrpnfbl;? bk&m;MuD;uvJ oMuFefwGif; rdkYvdkYvm; rodbl; oefU&Sif;a&; awmfawmf rvkyfxm;bl; jzpfaew,f ?
twufaeUusawmh urm0ufrSm oGm;tdyfMuw,f ? urm0uf&GmxJu usdKufZ,f bk&m;MuD; pdefzl;awmfeJY xD;wifwm&Sdw,fav ? toGm;rSm 0if;pdef q&mawmf MuD;qDudkvJ 0ifzl;w,f ? &dk;*dk;bk&m;udkvJ 0ifzlk;jzpfw,f ? 0if;pdef q&mawmfMuD;udk wcgrS rzl;zl; bl; ? urÇmh tMuD;qHk; avsmif;awmf rlMuD;udk jyD;atmif aqmuf EdkifwJh tjyif aemufxyf xdkif&uf bk&m;MuD; wckudkvJ urm0ufeJY EdkifvHk Mum;rSm aqmuf aew,f ? q&mawmf MuD; ausmif;ay:udk wufrSyJ ausmufwvHk; awmif2ck a&m avsmif;awmf rlMuD;a&meJY t&rf;vSwJh &Icif;awGudk zl;&awmhw,f
'Dwacgufuawmh ukodkvfawGvJ awmfawmf &cJhw,f ? wjcm; ae&mawGrSm aewm rsm;jyD;awmhrS udk,fhjrdKU udk,fjyefawmh rGefawG&JU ukodkvfa&; bmoma&; xufoefrIu awmfawmf tm;oefwmudk ododomom MuD; odvm&wmyJ
'Hkygwf wcsdKUawmh &Sdw,f ? wa,muf a,muf qD ar;ydkYjyD; wifcdkif;vdkufawmhr,f ?'DrSmuawmh uGefeuf&Sif raumif;wmeJY wifvdkY tqif rajybl; jzpfaevdkY
atmf arhvdkY.. raeU u jyefvmawmh Zif;usdKufrSm a&ief;oD; wwGJrS 300 eJU5wGJ 'l;&if;oD; yifaMuG 10 vHk; o,fvmcJhygaMumif;
blooom, Botazan, botchan, Chit Suu, dotekhaowe, Dragon Ball, fridayborn, Kaung Lay Luck, khanhlaing, koluchaw, La Goon, Mahuya, mokenlay, mrlynn, orjawlan, thatonthu, Winnermann, YuNge